(I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira. | Oromia Shall be Free
(I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira.
bilisummaa November 15, 2014	5 Comments
Waan hin barreeyfamin Dubbisanii sodaa hin jirre Uumuudhaan Mooraa Qabsoo A.I.B.O
Ibsa Koree Dandamachiiftuu Dhaaba A.I.B.O irra kenname.
Kan beeku haa yaadatuu, kan hin beeyne haa baratuu, A.I.B.O/IFLOn Farra Ayyaan-Laallattootaa, Abdii sabbontotaa, Qajeelchaa Daandii Walabummaa Oromiyaati.!!!
Eargaan Kun lammiilee Oromiyaa kan walabummaa Oromiyaa hawwaniifii qabsaawota AIBO/IFLOf dhaamsa ergaa gammachuu, afeerraa walgahii hatattamaati. Kabajamtoota hoggantootaa fii miseensota akkasuma Deeggartoota AIBO marti bakka jirttanitti afeerraan keenya kan jaallummaa isin haa gayu.
Akkuma beekkamu baroota torbaatamoota keessa ABO ykn WBOn dirree bahaa irratti hoogganummaa Sooreysa J/Jaarraa Abbaa Gadaatiin hundeeyfamee ture. Yeroonkun yeroo qabsoon bilisummaa sabootaa gara bahaa, kibba bahaa fi Kaaba itiyoophiyaatti jalqabameedha. Haalli Uumame kun jireenya impeyera itiyoophiyaa sodaa hamaa jala buusee ture. Kanaafiis sabbontonni itiyoophiyaa tooftaa lama lafa kaayanii turan. kuniis 1, Aangoo tabaroo siyaasa afaan qawweetiin dhunfatanii itiyoophiyaa fi itiyoophiyummaa tiiksuudha. 2, Sochii dhaabota bilisummaa Uummataatiif ijaaraman keessa leellestoota itiyoophiyaa galchuudhaan qabsoo bilisummaa sabootaa diiganii galuun habashoota biratti badhaafamuf turan.Mooraa qabsoo bilisummaa diiguun yoo dadhabame achuma turanii mooraa qabsoo waliin dhahuun qabsoo qancarsuurratti bobbaafaman. Bobbaan kun osoo hin dhibaawin mooraa QBO keessa seenee dhaaba ABO raasuu jalqabe. Yeroo sanitti ergaan kun nama hundaaf ifa hin turre. Sooreysi keenya J/Jaarraa Abbaa Gadaa ergaa murna kanaa sirritti waan hubateef dhaaba keenya AIBO hundeeysuuf murteeffate. Hundeeffamni AIBO\_IFLO yaada ergamtoota itiyoophiyaa yeroo saniif harkatti fashaleessee ture. Ifumaafuu maqaa oromoo fii oromiyaatiin bakkuma jiran akka turan taasise. Osoo AIBO\_IFLOn hundaa’uu dhabee Leellistoota itiyoophiyaa kan oromummaa fi oromiyatti hin ammanne jidduu rakkoon tokko hin jiru ture. Wanni dirree qabsoorra akka turan isaan godhulleen hin jiru ture.Injifannoon yeroo Jijjiiramaan booda argaman kan akka argama kaartaa ykn (Map) Oromiyaa, dagaaginni Adaa fii afaanii Kun hundi hin argamu ture. Kanaaf hundeeffamni AIBO\_IFLO mooraa QBO dhabamaarraa hambisuun seenaa boonsaa galmeeyse.
Ammaas taanaan AIBO\_ IFLOn waardiyaa ykn Tikha Q.W.Oromiyaati, Luugama hogganootaa kan dhaabbiilee Q.W.Oromiyaati, AIBO\_IFLOn baduu jechuun ayyaan laallattootaaf carraa guddaadha. Oolee bulee Q.W.Oromiyaa bakka jirutti akka dhadhaatti baqee baduu jechuudha. Haa tahuu malee baroottan dabran kanatti hanqina hubanno irraa kan ka’e waan alagaan hin dubbatin dubbatanii mooraa AIBO diiguuf ulee soda baay’isaa turan. Garuu AIBO\_IFLO akka isaan yaadan sana osoo hintaane dhaaba walabaa kan shoorarkaa baraa kanaan duratti rakkina Ummata Oromiyaatiif qabsaawuu jalqabe dhaaba seeraati.
Kanaaf ragaan ummata keenya.Kan biraa bara 1991 yeroo chaartaraa keessatti jidduu keenya kan turan murni jiimii kartar ykn (cater center) fii seera Mootummaa abbaa irree wayyaanee maqaa dhahuun gahaadha. Hundeeffama agoobara ULFO\_THBO keeysatti AIBO\_IFLOn barcuma miseensummaa heeraa fi seeraan isaaf kenname qaba. Ammaas taanaan miseensummaa dhaaba ULFO\_THBO keessatti qabu dhunfatee qabsoo isaa itti fufa. Haala shoorakaa baraa ilaalchisee AIBO\_IFLOn akkuma idil addunyaatti cimsee balaaleyfachuun alatti sababni AIBO\_IFLOn jeeqamuuf tokkolleen hin jiraatu.
Ammaan booda amala diiggaa kan jijjiirraa maqaa AIBO\_IFLO fakkeeysanii dandurree ykn daariqa (Virus) dhaaba keenyaan balleeysan yoomii fi Eeysattille eenyuufuu hin hayyamnu. Warren haala kanaan dhaaba keenya AIBO\_IFLO gara dhabamaatti Oofaa turan ammaas yaalaa jiru. Isaan kun haala kana hatattamaan dhaabanii gara marii walootti akka deeb’an yaamicha jaallummaa isaaniif dabarsina.
Marii kana milkeeysuufiis Koree Qindeeysituu Kora Qabsaawota AIBO\_IFLO hundeeysinee ciminaan irratti hojjachaa jirra. Barbaachisummaa kora kanaatti kan amantan hundi yaadaas tahee qeeqa qabdan akka nuuf gumaachitan kajaan isin afeerra. Yeroo fi bakka kora kanaa hubachuu kan barbaaddan toora odeeyfannoo kanaa gadiitiin nu qunnamuu kan dandeeysan tahuu ammumaan isin hubachiifna.
Dhiigni Mujaahidoota nubiraa wareegamanii ykn Murtii guutanii nuduraa haamul’atu, jechuhaaun dhaamsa keenya xumurra.
Iznii Gooytaatiin Oromiyaan Ni Walaboomti. !!!
Koree Qindeeysituu Kora Qabsaawota AIBO\_IFLO.
Facebook: – iflo.aibo@gmail.com
Tags IFLO IIBO ULFO
Previous Baqattoonni Yemen dararaan nu irratti raawwatamaa jira jedhu
Next “OPDOnlleen OMN keessa hojjatuuf mirga qabdi” jedhu bulchitoonni OMN
Very funny!! You pritend that you are still alive and kicking.I thought you passed away long ago and buried with the Sorreysaa.Backwarded creatures.You never learn.
Qarcaasa,it’s you the dumb ass who will never learn and still want to succumb the Oromo nation in the darkness and conspiracies of the selfish habasha minded voltures like urself.barbaric!
As.wr.wb,Jaalaawan akkam jiratu?Eeyyan Baga mul’attan bara dheeraa barbaacha keessan jooraa,jawwaraa turre.Gadheen laafina IFLO booda qabsoo keenyatti aggaammachuu jalqabde Sooressi keenya duunaan Etiyoophiyummaa nurratti xibaaraa jirti.Yaa IFLO baga mul’atte.Hanga walabummaatti isin waliin jirraa jabaadhaa.Gadaamessi Jaarraa fide Jaarraa tokko Danuu fidee jira.fidu. jidduu keenya jira, if keessa yaa barbaannu. yoom fiduu dide,Jara qabsoo hifateen Maqaa maqaa boqodhaa jedhaan.Garuu qabsoo keenya akka hin maqsine nuuf eegaa hadaraa Rabbii,Waaqni isin waliin haajiraatu.
Yaa waara IFLO baga mul’attan wanni isin hojjattan laafaa miti.Hujiin guddaan amma isin dhaaba kana dirree dorgommii siyaasaa keessatti deebisuudha.Eeyyan IFLOn deebi’e jechuun gadaan qabsoo deebi’e jechuudha.
I do not think that this is a starter. It is better if you rehabilitate FIDO. The religious name polarize people and make our people against each other rather than emphasizing on the main enemy. To be frank, the formation of IFLO was a great setback to our straggle contrary to what they right above. you guys, please grow up to the level of Oromummaa than adhering to principle of sectarianism.